एकै बेडमा ३ गर्भवती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एकै बेडमा ३ गर्भवती
चाप थेग्न नसक्दा चिकित्सक हैरानु
सुनसरी — पर्याप्त बेड नहुँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रसूतिका बिरामीको बिजोग भएको छ । दैनिक चाप थेग्न नसक्दा एकै बेडमा ३ जनासम्म बिरामी राख्नुपर्ने रकतिपयलाई भुइँमै उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूतिगृहको इमर्जेन्सी कक्षमा खचाखच गर्भवती । तस्बिर : प्रदीप
प्रतिष्ठानमा मातृशिशु स्याहार केन्द्र थप्न २ वर्षअघि भवन निर्माण सुरु भए पनि बीचमै रोकिँदा बिरामी मारमा परेका हुन् ।
प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागमा दैनिक क्षमता ३० जनाको मात्र छ । तर चौबीस घण्टामा ६० देखि ८० जना प्रसूतिका लागि आउने गरेका विभाग प्रमुख डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । ‘उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सधैं हम्मे पर्छ,’ उनले भने ।
प्रसूतिको इमर्जेन्सी क्षमता ५ बेडको मात्र छ । अप्रेसनपछि राखिने पोस्टनेटल वार्डको क्षमता ३६ वटा छ । जटिल अवस्था भएपछि प्रसूति विभागले मात्र दैनिक १५ जनाको अप्रेसन गर्ने र तीमध्ये अधिकांशलाई एक सातासम्म निगरानीमा राख्नुपर्ने भएकाले सधैं बेड अभाव हुने गरेको डा. रेग्मीले बताए । उनले चाप थेग्न नसक्दा बिरामीलाई जस्तै चिकित्सक र नर्सले सधैं हैरानी खेप्नुपरेको बताए ।
उपचारका लागि टाढा–टाढाबाट आउने गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसूति हुन पाउने अधिकार भएको भन्दै भर्ना हुन खोज्छन् । प्रसूतिको समय नपुगेका बिरामीलाई भने चिकित्सकले सम्झाइबुझाई फर्काउने गरेका छन् । दुई दिनअघि पनि भर्ना हुने खोज्ने एक बिरामीले चिकित्सकसँग गुनासो राखिन् । डयुटीमा रहेका डा. जीवन धमलाले प्रसूतिका लागि प्रतिष्ठानमा भएका सबै बेड भरिएको, बिरामी खचाखच भएकाले तत्कालै भर्ना गर्न नसक्ने जनाए ।
भर्ना हुन आउने गर्भवती महिलालाई उनले सम्झाउने प्रयास गर्दै भने, ‘आफैं हेर्नुस्, सबै बेड भरिएका छन् । बेथा नै नलागी भर्ना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
चिकित्सक र गर्भवतीबीच विवाद चलिरहेका बेला करिब १५ जना अन्य गर्भवती बेड नपाएर प्रसूति विभागको करिडोर, भुइँ र चौरमा पालो कुरेर बसेका थिए । प्रसूति विभाग साँघुरिएको हो कि गर्भवतीको संख्या बढेको हो भन्ने जिज्ञासामा सिनेटरसमेत रहेका रेग्मीले भने, ‘प्रसूति गर्नेको संख्या बढेको होइन, पूर्वमा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज, जिल्ला र अञ्चल अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीले गर्न सक्ने सामान्य प्रसूति पनि जोखिम मोल्न नसकेर प्रतिष्ठानमा रिफर भएर आउँछन् । त्यसैले हामीलाई चाप भयो ।’
अस्पतालका सहायक निर्देशकसमेत रहेका प्रसूति विशेषज्ञ डा. पप्पु रिजालले ओपीडीमा प्रसूति समस्या लिएर आउनेको संख्या दैनिक सरदर ६ सयजना रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग योग्य दक्ष जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बेड अभावका कारण चारगुणा बढी बिरामीको चाप थेग्न सकेका छैनौं ।’
अत्यधिक चाप बढेपछि दुई वर्षअघिदेखि चार सय बेडका अलग्गै मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसीएच) को निर्माण प्रतिष्ठानले २०७३ असार २८ देखि सुरु गरेको थियो । तर केज कन्सल्ट्यान्ट रहेको शर्मा–रसुवा जेभी काठमाडौंलाई ७२ करोड रुपैयाँमा बनाउन दिए पनि सिनेटमा पास नगरी अघिल्ला उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासले २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको टेन्डर गरेको भन्दै विवाद उठेको थियो । सोही कारण भवन निर्माण कार्य एक वर्षदेखि रोकिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०७:१३
नेपाल–श्रीलङ्का द्विपक्षीय वार्ता
भाद्र १६, २०७५ रासस
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाबीच शनिबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । त्यस अवसरमा नेपाल–श्रीलङ्का सम्बन्धका सबै पक्षमा सङ्क्षिप्त विचारविमर्श हुनाका साथै पारस्परिक हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपतिद्वयको उपस्थितिमा दुवै देशका अधिकारीले आपसी सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसैगरी दुई देशबीच युवा विकाससम्बन्धी समझदारी भएको छ । आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले हस्ताक्षर गरे ।
दुई पक्षीय वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, श्रीलङ्काका विदेश राज्यमन्त्री वसन्ता सेनानायके, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत विश्वम्भर प्याकुर्‍याल र नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत डब्ल्यू एस परेरा तथा राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना श्रीलङ्काली समकक्षीको सम्मानमा आजै साँझ रात्रिभोजको आयोजना गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति सिरिसेनासँग प्रधानमन्त्रीको भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग शनिबार अपराह्न शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा राजधानीमा रहेका राष्ट्रपति सिरिसेनासँग प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।
भेटका अवसरमा उनीहरुबीच नेपाल, श्रीलङ्का सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, श्रीलङ्काका विदेश राज्यमन्त्री वसन्ता सेनानायके, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत विश्वम्भर प्याकु¥याल र नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत डब्ल्यू एस परेराको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ २१:४८